सावधान: बाहिर निस्किदै हुनुहुन्छ ? आजबाट प्रहरीको विशेष टोली परिचालन गरिदै !
काठमाडाैं, १३ चैत। सरकारले घो,षणा गरेको लकडाउनको उ,ल्लङ्घन गरेर यदि तपाई बिना काम बाहिर हिँडिरहनुभएको छ ? यदि छ भने तपाईं प्रहरीको फ,न्दामा पर्न सक्नुहुनेछ । अत्यावश्यक कामबाहेक त्यत्तिकै हिँड्नेलाई प्रहरीले स,मातेर आजदेखि आफैँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने भएको छ ।
को,रोना भा,इरसको स,ङ्क्रमण रो,कथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्न आजदेखि थप क,डाइ गरिएको छ । सरकारले स,म्भावित स,ङ्क्रमणबाट बच्नका लागि गरेको ब,न्दा ब,न्दीमा मानिस घर बाहिर निस्कन थालेपछि थप क,डाइ गरिएको हो । सरकारले आज क,डाइ गरेपछि मानिस पनि छिटफुट रुपमा हिँडडुल र सवारी साधन पनि कम चलेका देखिन्छन् । एम्बुलेन्स, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारमाध्यमलगायत अतिआवश्यक सेवाका सवारीमात्र सडकमा गुडेको देखिन्छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले आज लकडाउनको चौथो दिन अन्य दिनको भन्दा हिँडडुलमा क,डाइ गरेको बताउनुभयो । “लकडाउनलाई उ,ल्लङ्घन गर्न थालेपछि आजदेखि हामीले थप क,डाइ गरेका हौँ” उहाँले भन्नुभयो, “बिना काम बाहिर निस्कनेलाई नि,यन्त्रणमा लिइनेछ ।”
उहाँका अनुसार यसरी मानिस अनावश्यक रुपमा बाहिर निस्केकालाई नि,यन्त्रण गर्नका लागि परिसरले दुईवटा गाडीमा प्रहरीको विशेष टोली प,रिचालन गरेको छ । टोलीमा रहेका प्रहरीले आफूसँग भएको उ,पकरणमार्फत २–३ फिट टाढैबाट बाहिर हिँडिरहेका मानिसलाई नि,यन्त्रणमा लिनेछ ।
“ती दुई गाडीमा रहेका प्रहरीको गस्ती सानासाना गल्लीमा पनि जान्छन् । अनावश्यक रुपमा हिँडिरहेकालाई हामीसँग भएको उ,पकरणले नि,यन्त्रणमा लिन्छौँ” उहाँले भन्नुभयो, “यसरी नि,यन्त्रणमा लिएकालाई प्रहरीको क्वा,रेन्टाइनमा राखिनेछ ।”
उहाँका अनुसार अहिलेसम्म १७ जनालाई नि,यन्त्रणमा लिइएको छ । उहाँले कुनै धर्ना, जुलुस नभई म,हामारी रो,क्नका लागि सरकारले चालेको कदमलाई सबैले स,हयोग गरेर बाहिर ननिस्कनसमेत आ,ग्रह गर्नुभयो ।
यसैगरी अन्य दिनको तुलनामा आज कम सवारी साधन चलेका छन् । महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठले सरकारले गरेको लकडाउन उ,ल्घङ्घन गर्ने १५८ सवारी साधानलाई नि,यन्त्रणमा लिएको जानकारी गराउनुभयो । विश्वव्यापी रूपमा को,रोना भ,इरसको म,हामारी बढ्दै गएपछि सरकारले यही चैत ११ गतेबाट लागू हुने गरी ल,कडाउनको घोषणा हो ।
सरकारले अत्याश्यक खाद्यपदार्थबाहेक अन्य सवारी साधन चल्न दिएको छैन भने मानिसलाई पनि बाहिर निस्कन भनेको छैन । अहिलेसम्म नेपालमा विदेशबाट आएका तीनजनामा को,भिड–१९ स,ङ्क्रमण देखिएको छ । लकडाउनमा अत्यावश्यकीय पसलबाहेक अरू सबै ब,न्द छन् । सरकारले दूध, पानी, खाद्यान्न, तरकारीलगायतका पसल खुल्ला राख्न आ,ग्रह गरे पनि त्यस्ता अ,धिकांश पसल बन्द छन् ।